The cryosphere: ihe ọ bụ na ihe ọ pụtara maka ihu igwe ụwa | Netwọk Mgbasa Ozi
N’isiokwu ndị ọzọ anyị kwuru maka ya oyi akwa nke ikuku, njikere okirikiri, ihe omuma na mmekọrịta ya na Ọdịdị nke ụwa. N'okwu a, anyị ga-ekwu maka mpaghara ọzọ nke ụwa anyị nke ndị sayensị kpọrọ dị ka okpokoro. Igwe mmiri na-ezo aka n’ebe niile oyi kpọnwụrụ n’elu ụwa ebe enwere naanị mmiri n’ụdị ice siri ike ma ọ bụ snow. Aha a sitere n'okwu Grik "kryos" nke putara oyi. Enwere ike ịsị na cryosphere bụ akụkụ nke hydrosphere ebe mmiri na-adịgide oyi n'ihi oke okpomọkụ.
Ga-achọ ịma ihe niile gbasara igwe ojii na mkpa ọ dị maka ụwa anyị na mmepe ndụ? Naanị ị ga-anọgide na-agụ 🙂
1 Ebe cryosphere di
2 Akụkụ na akụkụ nke cryosphere
3 Oké osimiri na glaciers
4 Icebergs na permafrost
Ebe cryosphere di
Mpaghara kachasị oyi na mbara ala anyị Ha na-emetụta ihu igwe ụwa niile. Na mgbakwunye, ọ bụ ebe obibi nke osisi, anụmanụ na ndị mmadụ ndị dabara na ọnọdụ okpomọkụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi n'oge. Mpaghara oyi a na-agbasawanye na ndọtị n'oge ọnwa oyi na ugwu abụọ ahụ. Oge a na-akpọ cryosphere bụ ebe snow na-ada na ala, osimiri na ọdọ mmiri na-ajụ oyi.
Na njuputa na ọ dị naanị na okporo osisi. Agbanyeghị, a na-ahụkwa snow na ice na-adịgide na ebe ọzọ n'ụwa. Malite na Arctic, na North osisi bụ nnukwu ebighebi akpụrụ mmiri a maara dị ka Arctic Ocean. Nke a bụ ebe oke osimiri na-eto ma na-agbasawanye n'oge oge oyi. N'aka nke ozo, n'oge oge ọkọchị, n'ihi oke okpomọkụ, mpaghara a na-abanye na ice dị obere.
N'aka nke ọzọ anyị nwere Antarctica. Emi odude ke South osisi nke ụwa, ọ bụ oyi kpọnwụrụ kọntinent par kacha mma. Ọ bụghị naanị nnukwu ice, kamakwa o nwere shelf. Ha nwekwara ebe ice na-ese n’elu mmiri na-agbasa n’elu oke osimiri. Icebergs na-etolite na ebe ndị a.
N'etiti okporo osisi nke ụwa, e nwekwara cryosphere. Ha bụ ebe dị elu ebe ice na snow na-adịgide n'afọ. Ihe omuma atu nke a bu snow nke Ugwu Kilimanjaro n'Africa, ice na ugwu nke United States, ugwu ugwu Canada, China na Russia.
Akụkụ na akụkụ nke cryosphere
Snow na akpụrụ mmiri bụ isi ihe dị na mbara igwe ndị a. O nwere ike ịbụ ice mmiri, glaciers, ice shelves, oyi kpọnwụrụ (permafrost), na icebergs. The snow Ọ bụ ọdịda n'ụdị kristal ice na-ada n'ala mgbe okpomọkụ dị ala na ọkwa iru mmiri dị elu. Ha na --ejuputa udiri mmiri ozuzo a.
Otu n'ime njirimara na mkpa snow bụ:
Enwere ike ịchọta ya n'ụwa niile, ọbụlagodi nso Equator na ebe dị elu.
Ọ na-ehie anyanwụ ma na-emetụta ihu igwe nke ụwa anyị.
Na-enye ebe obibi maka ọtụtụ anụmanụ na osisi.
Ọ na-enye ndị mmadụ mmiri, osisi na anụmanụ gburugburu ụwa.
Ke ofụri ofụri, ọ bụ ihe dị mkpa ihu igwe akụrụngwa.
N'aka nke ọzọ, ice na-apụta mgbe okpomọkụ ridala n'okpuru ebe oyi. Nke a bụ mgbe mmiri mmiri na-agbanwe ghọọ steeti siri ike ma mepụta mkpokọta ọnụ. Ice bụ ihe dị mkpa na mpaghara kpụkọrọ akpụkọ, icebergs, na ala kpụkọrọ akpụkọ.
Enwere ike ichikota njirimara ejiri akpụrụ akpụ dịka:
Ọ dị n'akụkụ ụwa niile, mana ọ na-etolite tumadi na latitude, na ebe dị elu, ma ọ bụ na mpaghara ebe okpomọkụ dị oke ala.
Ice nwere ike ghara ịbụ ihe a na-ahụkarị n'oké osimiri, ọdọ mmiri, na n'osimiri ma ọ bụrụ na ihu igwe na-agbanwe agbanwe ma ọnọdụ okpomọkụ na-ekpo ọkụ. Otú ọ dị, e nwere ọdọ mmiri na oké osimiri ebe ice na-adị oké njọ nke na a chọrọ ụgbọ mmiri pụrụ iche a na-akpọ ice ice ka ọ gafee ha.
Na-enye ndị mmadụ, anụmanụ na osisi mmiri.
Ọ na-ekwe ka ọmụmụ banyere mgbanwe ihu igwe nke ụwa.
Oké osimiri na glaciers
Ice ice ma ọ bụ mmiri mmiri na-etolite mgbe mmiri dị n'oké osimiri na-eme ka mmiri dị jụụ mgbe niile. Imirikiti ice mmiri a na-etolite n'oké osimiri dị na okporo osisi.
N'agbanyeghị ihe ndị a na-eche gbasara okpomoku ụwa na mgbanwe ihu igwe, agbaze ụdị ice a anaghị ebulite oke osimiri. Mmiri a bụ akụkụ nke mmiri oké osimiri n'onwe ya. Igwe mmiri a na-ejikọta oke ihu igwe nke ụwa niile. Ha na-ekere oke oke na ndu na omenaala nke ndi ala igbo.
Na mgbakwunye, ọtụtụ anụmanụ chọrọ ice iji lanarị. Hụ anụ ọhịa pola, akàrà, na anụmanụ ndị ọzọ nke Arctic. N'ikpeazụ, enwere ike ịsị na ice mmiri dị oké mkpa maka ọmụmụ banyere mgbanwe ihu igwe.
N'ịga ebe ndị kachasị elu na mbara ala, anyị na-ahụ ndị ice ọzọ akpọrọ glaciers. Igwe mmiri ndị a bụ oke mmiri ice na-agbakọ na ala site na ọtụtụ oge oge snow. Athough ọ dịghị ka, kpuchie 10% nke elu ụwa dum. N'ihi mgbanwe ihu igwe, ha na-emewanye obere.
Ha bụkwa ezigbo mmiri maka ndị bi na ha. Ha na-echekwa nnukwu mmiri ọgbara ọhụrụ nke edobere ka ọ ableụọ.
Icebergs na permafrost
Icebergs bụ nnukwu ice nke na - agbaji glaciers ma na - ese n’elu mmiri. Akpụrụ ice ndị a dịkwa oke mkpa maka ụwa. N'adịghị ka ice mmiri, ice ice na-agbaze na-ewelite ogo mmiri. Ha na-enye ebe anakpo krill, obere crustacean nke bụ ihe oriri dị mkpa maka penguins, akàrà, whale, na nnụnnụ mmiri.
A na-ejikwa ha dị ka ihe ọmụmụ maka ndị ọkà mmụta sayensị chọrọ ịmata mgbanwe nke ụwa na paleoclimate.
Permafrost ma ọ bụ ala oyi kpọnwụrụ bụ mpaghara ụwa nke oyi zuru oke site na mmiri siri ike. N'etiti njirimara ya anyị hụrụ na ọ bụ akwa na-arụ ọrụ nwere ike ịchekwa gas dị ka carbon na methane. Ndị ọkà mmụta sayensị na-amụ otú gas ndị a ga-esi emetụta ihu igwe ka okpomoku dị ọkụ na permafrost gbazee.
Enwere m olileanya na site na isiokwu a ị nwere ike ịmatakwu ihe gbasara ụwa anyị na ebe a na-akpọ cryosphere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ebe nkpuchi
Daalụ maka usoro ahụ, ọ na-emecha.
ogbenye bear dị ka ọ na-ewute m nke ukwuu n'ihe niile na - eme ...
Igwe ọkụ WIFI